Noma yimuphi Izindlela kwesisindo kudinga ukusetshenziswa umsebenzi eziyinkimbinkimbi. Ezinye ejenti anti-ukukhuluphala bagxila ukunciphisa ukudla usuku lonke. Kulesi sihloko Ngithanda ukunitshela amaprotheni okunyakazisa, okuzokwenza usizo ukubabulala Kilos extra.
Ezinye izazi ziye saqiniseka ukuthi lawa cocktail abasakwazi effeciency. Isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo esifanayo wokulungiselela Shake wamaprotheni kubantu kwesisindo silula. Ngenxa yalesi kubalulekile uhlanganise ingxube dry ne-yogurt (yogurt ungayithola enye ngaphandle izithasiselo, okungcono zemvelo) noma ubisi. Konke lokhu exutshwe blender. Ukwakheka isiphuzo ziyahlukahluka.
Amaphrotheni okunyakazisa isisindo ukulahleka ezibhekwa kungenangozi emzimbeni, kodwa umphumela oyifunayo, bengavumi ukukunika, uma akalisebenzisi. Bona sosredotochny sendlela ukunciphisa ukudla usuku lonke.
Amaphrotheni okunyakazisa - Izimo
Noma kunjalo, uma unquma ukuba ulahlekelwe isisindo ngale ndlela, khona-ke kufanele akhumbule ukuthi awukwazi ahileleke isikhathi eside isikhathi. Ngaphezu kwalokho, uma ukuthambekela ukusabela okuhlukahlukene iguliswa ukusetshenziswa iziphuzo ezifana kufanele aphathwe ngokucophelela.
Ukusetshenziswa amaprotheni cocktail
Phakathi izici ezinhle main bungabonakala:
esikhundleni usebenzise kuqamba-ingxenye noma yikuphi ukudla okuthola;
ukuphepha uma isetshenziselwa umzimba;
ukuthola umphumela oyifunayo kusukela ukusetshenziswa okunjalo isiphuzo neminye.
Okumbi amaprotheni cocktail
kufanele ichasiselwe kuye yilezi:
semali ushukela kule Ukwakheka isiphuzo futhi esincane izakhi;
phakathi kokusebenza kufanele kuncishiswe isibalo ethola okunye ukudla ukuthi akazange kube nomphumela omubi;
elivela kuzo izinkinga wokugaya ukudla ngenxa yokusebenzisana elingalungile noma cocktail okungajwayelekile;
kwezinye izimo kungase eshodayo e inani elidingekayo kilojoule ukuthi bazohluleka futhi ngeke nilingenise elamukelekile
Kufanele kuqapheleke futhi ukuthi lezi nemiphumela ethile engathandeki kwenzeke kuphela uma reception wenziwa kokteylel irregularly. Ngesikhathi esifanayo futhi into okuyiyona ebaluleke kakhulu umsebenzi, okuyinto nakanjani ibe naso ukuze bathole imiphumela oyifunayo ngokuhlanganyela ukusetshenziswa kwalesi isiphuzo.
Elinye iphuzu elibalulekile iyona yokwakheka cocktail kangcono wenza ekhaya. Akubalulekile ukuthenga iziphuzo ukwakheka engaziwa ezitolo. Yalutho nokuningi okuthembekile ukwenza isiphuzo emvelo ephansi fat iyogathi, kuyilapho esikhundleni sazo ukudla. Ngakho, ngemva kwezinsuku ezimbalwa uyozizwa Imiphumela ngokwakho.
Ngemva amaprotheni ubhekwa omunye ukudla ebaluleke kakhulu. Noma kunjalo, akufanele sixhaphaze ke, ngoba okweqa ingakulimaza emzimbeni. A ingxube amaprotheni ezisekelwe ukwazi ngokushesha futhi kalula ukuqeda indlala futhi bazogcwalisa umzimba nge-amino acid. Impela, ungathola amaprotheni ukudla ezifana amaqanda, inyama. Kodwa ungakhohlwa ukuthi nabo cholesterol, okuyinto eyingozi inqwaba. Ngakho-ke kungcono ukuthola iprotheni ngosizo iziphuzo enjalo. Indlela ukupheka okunyakazisa amaprotheni? Okulandelayo izindlela ezimbalwa.
It ikuvumela ukuba ngokushesha bazogcwalisa umzimba. Ukuze wenze lokho, uzodinga: isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, lukalamula, apula eliluhlaza, umbhangqwana amahlamvu iklabishi, okumele idlule juicer. Bese wengeza 120 amagremu yogurt. Uqedile!
Nale isiphuzo uyozizwa kuqubule amandla futhi ushiye Ulambile isikhathi eside. Okungenzeka ukuyisebenzisa ngaphambi nesikhathi sokudla nangemva kwaso. Ngokuba ukulungiswa udinga ukuba adabule juicer imikhiqizo efana yilezi: isipinashi, beetroot, carrot, apula, dill. Khona-ke beat in a blender ne ukwengeza Iqanda amaprotheni. Isiphuzo ulungile!
Isinkwa izizwe eCaucasus - the Pita: okuqukethwe kwama-kilojoule futhi iwusizo kwalo mkhiqizo
Ginger, uju, lemon - ukusekela amasosha omzimba.
Amavithamini iodine ngoba indlala yegilo